Wonke umntu uyazi ilizwi elicebisa isidlo sasekuseni ukuba sidle ngokwabo, ukwahlula isidlo kunye nomhlobo, kwaye unike isidlo kwisitha. Le ndlela yokutya izondlo zanamhlanje zonyango jikelele zikhuthaza ukuba ziphile kwaye zigcine zimelele. Okwangoku, abafazi abaye bafumana ibinzana elinamaphiko banokuba luncedo ngakumbi xa besenza isidlo sakusihlwa esifanele kwisibonakaliso se-zodiac.
Abavumbuli beenkwenkwezi baqinisekisa ukuba umntu ngamnye, kuxhomekeke kwisibonakaliso se-zodiac kwaye, ngokufanelekileyo, iziganeko ezimelelayo, azikho nje i-horoscope yakhe, kodwa kunye ne-propagolism yakhe ethile. Kuthetha ukuthini oku? Kulula kakhulu. Ngoku, ukuze wenze inkqubo yakho yokondla, akudingeki ukhangele kwi-horoscope yeveki yokutya, kuba zonke ezi pharamitha zifakwe kuwe ngeenkwenkwezi ukususela ekuqaleni.
Ngoko, umzekelo, yintoni isibonakaliso esicetywayo se-zodiac kwisidlo sasekuseni esilungileyo? INzululwazi ithi iboniswe kwimpawu zomoya - iGemini, iLibra ne-Aquarius. Bakufuna ekuseni kusomelezwa ngokuqinile, kwaye banokwenza isidlo sakusihlwa, njengoko kufanelekile, ngokukhuselekileyo kwabanye. Kwiimeko ezinzima, ukuba ilambile ayikwazi ukunyamekela, yithathe indawo yokutya ngesaladi elula okanye i-glass of kefir.
Isidlo sakusasa siboniswa nakwiimpawu zomhlaba - isalathisi sazo sisimboli sokuzinza, kodwa unokuma njani ngokunyanisekileyo kwiinyawo zakho kwisisu esingenanto? Akufuneki kuphela ukuba badle isidlo sakusasa, kodwa nokuba badle kunye nokutya. Kwaye kuyinqweneleka ukuba umthwalo emzimbeni uzinzile, oko kukuthi, isidlo sakusihlwa sasifana nesidlo sasemini, kwaye sidla isidlo sakusihlwa. Ngelinye igama, ngokwe-horoscope, isiseko sesondlo esifanelekileyo sempawu ezifana neTaurus, Virgo kunye neCapricorn iyafana kunye kwakhona kwakhona.
Isidlo sasekuseni esifanelekileyo seempawu zomlilo (Sagittarius, Leo, Aries) ukungabikho kwasekuseni. Inyani kukuba ukunyuka kokutya kusasa umlilo wabo wangaphakathi, ngelixa amandla angaphakathi, endaweni yokusetyenziswa kwezenzo ezilungileyo, ilawulwa kuphela ekutyeni ukutya. Bacebisa ukuba baphuze ii-horoscopes ekuseni ngengqayi yekhofi, itiye, ijusi - mfutshane, into oyithandayo kunye nokokukwenza ube namandla ngakumbi. Unokutya, umzekelo, isanti kunye neentlanzi. Kodwa ngesidlo sasemini kufuneka uhlale ugcwalisa yonke into ongayifumananga ngayo isidlo sakusasa - udle ngokuqinileyo, kodwa udle, ngokukhawuleza, hlaziya konke.
Icala elinzima kunye nabameli beempawu zamanzi. Amanqatha, ii-Scorpions kunye nePisces kufuneka zidakwe kusasa, kwaye kuphela i-10 -11 yure ine-breakfast breakfast. Isidlo sakusasa kufuneka sibe ngendlela yogurt okanye isaladi yemifuno. Abayidingi isidlo esikhulu, isobho esisodwa nje. Kodwa ekudleni, kukho iimfuno ezahlukileyo. Akufanele ukuba kushushu kwaye kutywala, kuba abameli baloo mqondiso kubaluleke kakhulu ukuqokelela nokususa umswakama ongaphezu komzimba.
Iindiza ezinobuninzi kakhulu ezinobomi ezifudumele
I-pie e-7 yecattillas ngaphandle kwenyama
U-Ksenia Sobchak wachaze ukuba umyeni wakhe uyamgxeka
Ukufumanisa iingxaki zokukhulelwa nokubeletha
Iimpawu ezixakekayo malunga namavithamini
Indlela yokuhlobisa ikhekhe labantwana